I-MinerOS GNU / Linux: Uhlelo Lokusebenza Lwezimayini Zedijithali (MilagrOS) | Kusuka kuLinux
Ukubingelela, amalungu nezivakashi zaleli Bhulogi elikhulu nelibanzi lokufinyelela emhlabeni wonke ku-Free Software naku-GNU / Linux. Ngemuva kwezinyanga eziningi ngaphandle kokubhala ngale ndlela, namuhla ngikulethela incwadi emayelana nentuthuko yami entsha kwiFree Software World, ehlanganisa konke engikufundile kuze kube manje I-GNU / Linux, i-Intanethi (i-Webapps) kanye ne-Digital Cryptocurrency Mining:
0.1 Abavukuzi be-GNU / Linux: Uhlelo Lokusebenza Olulungele i-100% lwe-Digital Cryptocurrency Mining
1 Kuyini iMinerOS GNU / Linux?
1.1 Uhlobo oluzinzile lwekusasa
1.1.1 Imininingwane ebalulekile ibuyekezwe ngomhlaka 11/07/2018
1.2 IMilagrOS - Uhlobo olusha oluzinzile
1.2.1 Imininingwane ebalulekile ibuyekezwe ngomhlaka 30/07/2021
Abavukuzi be-GNU / Linux: Uhlelo Lokusebenza Olulungele i-100% lwe-Digital Cryptocurrency Mining
Kuyini iMinerOS GNU / Linux?
Kuyinto a I-GNU / Linux Distro, okwamanje eyenziwayo futhi etholakalayo ukulanda nge-beta version (0.2) nomnikelo wangaphambilini (umnikelo kuphrojekthi) kunguqulo yayo i-beta 0.3.
Kodwa-ke, kulindeleke ukuthi inguqulo yokuqala ezinzile, okungukuthi, i- Uhlobo lwe-1.0 (Petro) ka Abavukuzi be-GNU / Linux ingasetshenziswa njenge Isifunda sokusetshenziswa kwansuku zonkenjengoba iletha konke Isoftware Eyisisekelo Ebalulekile Ekhaya Nehhovisi, Ngokumiswa okususelwa ku-Ubuntu 18.04 (Isimanjemanje nokuhambisana okuphezulu) neMX Linux 17 kususelwa ku-DEBIAN (Ukuzinza, ukuthwala nokwenza ngokwezifiso okuphezulu) ekuhlanganisweni kweXFCE Environment (Light and Functional) + Plasma (Enhle neRobust), ngakho iguquguquka ngokuphelele kunoma iyiphi i-PC (Ikhompyutha yomuntu siqu) yokusebenza okuphakathi okuphakathi noma okuphezulu ngaphandle kwenkinga.
Uhlobo oluzinzile lwekusasa
La Uhlobo lwe-1.0 de Abavukuzi be-GNU / Linux izofika ngokusekelwe ku- Ubuntu 18.04 futhi izosinda 1 GB hlanganisa (4.3 GB) lokho Uhlobo lwe-0.3 ngenxa ye- Imvelo yePlasma eyenziwe ngezifiso enezinhlelo zokusebenza eziningi zomdabu, kepha izosebenzisa imemori engaphansi ye-RAM, cishe u-400MB uma kuqhathaniswa no-640MB we-Version 0.3. Bhuqa ngokugcwele kumphathi weseshini yokungena (i-lightdm) ngokwesilinganiso kumasekhondi angama-30 bese uvala ngokuphelele ngokwesilinganiso ngemizuzwana eyi-10. Nge-5 Digital Mining Software yayo kanye namaWallets ayi-6 afakiwe.
Uhlobo lwe-Distro MinerOS GNU / Linux Kulindeleke ukuthi yethulwe kusuka Ngo-Ephreli 19 we-2.018, noma ngemuva kokushicilelwa okusemthethweni kwe Ubuntu 18.04. IMinerOS GNU / Linux 1.0 izoletha izinhlelo zezimayini IMinergate, CGMiner, CPUMiner, Claymore kanye I-XMR-STAK-CPU, kanye ne-Armory, i-Exodus, i-Jaxx, i-Magi Wallets, ne-plugin yokuthola i-Trezor Hardware Wallet efakwe ngokuzenzakalela.
Ngamafuphi, iMinerOS GNU / Linux Kuyinto a Uhlelo Olungasetshenziswanga “Olungeyona Inkululeko” kanye ne- “100%” ilungele ukusetshenziswa Ekhaya, eHhovisi kanye / noma ku-Cryptocurrency Mining. Futhi iguqulwe kalula ibe yi-Linux Gamer ehambisana nezinhlelo zokusebenza ze-Microsoft ngokufaka i-PlayOnLinux ne-Steam.
Imininingwane ebalulekile ibuyekezwe ngomhlaka 11/07/2018
Ikhishwe Uhlobo lweMinerOS 1.1 futhi kunqunywe ukuthi kuqedelwe ukuthuthukiswa kwayo ngokuphelele. Ngakho-ke esikhathini esizayo esiseduze, konke okwenziwe kuyo kuzothuthelwa kwi-Distro entsha ebizwa nge-MilagrOS.
IMilagrOS - Uhlobo olusha oluzinzile
Imininingwane ebalulekile ibuyekezwe ngomhlaka 30/07/2021
Kusukela ngoJulayi 2.019, i- i-Distro MinerOS endala ngokusekelwe ku Ubuntu 18.04, ayivuselelwanga kakhulu, kepha konke ukuthuthuka kwayo kuthuthelwe ku- iDistro MilagrOS entsha, ngokusekelwe ku I-MX Linux 19.X, yona yona esekelwe UDEBHANE 10.X, ngenxa yalokho, ukuze ufunde kabanzi ngalokhu I-Distro ifanele i- Izimayini Zedijithali, kufanele bavakashele iwebhusayithi esemthethweni efanayo ku- Iphrojekthi yeTic Tac | Ama-Distros.
"Izimangaliso GNU / Linux, uhlelo olungekho emthethweni (Respin) lwe-MX-Linux Distro. Okuza nokwenza ngokwezifiso ngokweqile nokwenza kahle, okwenza kube kuhle kumakhompiyutha anezinsizakusebenza ezincane noma ezindala, nakubasebenzisi abangenawo amandla we-Intanethi noma abanomkhawulo wolwazi lwe-GNU / Linux. Uma isitholakele (ilandiwe) futhi yafakwa, ingasetshenziswa ngempumelelo nangendlela efanele ngaphandle kwesidingo se-Intanethi, ngoba konke okudingayo nokuningi kufakwe ngaphambilini".
Ungabona futhi imininingwane yakamuva kwiwebhusayithi yethu kokulandelayo isixhumanisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-MinerOS GNU / Linux: Uhlelo Lokusebenza Lwezimayini Zedijithali (MilagrOS)
UMANUEL ARTURO SILVA ROCHA kusho
Sawubona okuthunyelwe okuhle 🙂.
Phendula ku-MANUEL ARTURO SILVA ROCHA
Ngiyabonga! Ngibeke lonke ulwazi lwami kuleyo Distro!
Sawubona Jose, sawubona
Ngiyaqonda ukuthi iyi-distro entsha futhi umbuzo wami uthi: Ingabe le distro entsha iyakweseka ukufakwa kwezinhlelo ezinjenge-postgres, i-docker, i-postman, i-mysql, njll ngaphandle kwezinkinga noma ngabe yizinhlelo zasekhaya kuphela (ihhovisi lamahhala)?
Ongaziwa, kunjalo. Isekela lonke ipulatifomu yohlelo lwe-GNU / Linux!
«Igama lekhodi ye-Distro MinerOS GNU / Linux Version 1.0 izoba ngu" Petro "ngokuhlonipha i-Cryptocurrency yokuqala noma i-Official Cryptoactive yaseBolivarian Republic yaseVenezuela». Kubi kakhulu, ukuthi ufake inqubomgomo (hhayi okuhamba phambili) ku-linux OS.
Phendula kubhokisi lamafu
Kuyadabukisa impela ukuthi ubona leli gama njengelinye lepolitiki! I-Version 1.2 izobizwa nge-Onixcoin, i-0.3 izobizwa ngeBolivarcoin futhi okulandelayo kuzobizwa ngokuthi yi-National Private noma kaHulumeni kaHulumeni kaHulumeni owenziwe yiNational Private Sector noma iVenezuela State (Government), kungakhathalekile ukuthi yiliphi iqembu noma imfundiso ekuyalayo! Ngakho-ke, ayibizwa ngokuthi yiPetro ngokuthile kwezepolitiki, ibizwa ngePetro ngokuthile okunengqondo nokuthengisa! Uma iCapriles, iMachado, iMendoza noma enye ye-Opposition of the Country idonsa i-Crypto, khona-ke ngokuqinisekile enye ye-1.X yesikhathi esizayo izobizwa kanjalo. Angiyena usopolitiki, nginguchwepheshe wezobuchwepheshe!
Mr. Technologist ongafuni ukufaka ipolitiki:
Noma yini enophawu "Venezuela" ayethembekile, hhayi i-cryptocurrency, hhayi ukusatshalaliswa kwe-linux. Umhlaba uyakwazi okwenzekayo eVenezuela.
Futhi ngasendleleni ... okunye ukusatshalaliswa kwe-linux ... okunikeza into efanayo ongayithola ekusatshalalisweni kwakho kwe-linux ngemiyalo embalwa kukhonsoli. Akakhulumi.
Inakho konke noma iyiphi inkohliso engaba nayo.
Indlela ethakazelisayo nenenhlonipho! Ake sibheke ukuthi ngabe ngiyaqonda yini: Akukho lutho oluphathelene neVenezuela noma olwenziwe eVenezuela oluthembekile? Ake sithi, ngokucatshangwa okuphikisiwe, ukuthi lokhu kuyiqiniso ngokuphelele futhi akunakuguqulwa, ngakho-ke uqinisile impela. Kepha ngokuba nayo, uziphika njengomuntu ocabangayo, othuthukile othuthukile, njengoba ukhona, usebenzisa noma usebenzise le Blog enhle futhi enhle kakhulu yaseVenezuela. Ngokwazi kwami, abantu baseVenezuela (Bonke: Abaphethe Izikhulu Nabaphikisi, AmaSocialists Nongxiwankulu, AmaLungelo NamaLeftist) bayafana, bahle futhi babi, njengabo bonke abanye abantu. Noma kunjalo, lapho uguquka siyakhuluma. Ukubingelela nokunakekela uswidi ...
Ukuxolisa okuyinkulungwane ngokuphawula kwami ​​kwangaphambilini. Ngikhipha konke engikushilo ngamahloni.
IVenezuela ingabantu abahle, ezweni elihle, futhi ihlala njalo ivelele ukufuna ukuzithuthukisa, noma ngabe, ngombono wami othobekile, uhulumeni wayo akahambisani nayo.
Ngikhumbula futhi ngawubukela phansi umsebenzi wakhe. Ngazi kahle kamhlophe ukuthi kufanele ukuthi uchithe amahora amaningi kuyo, futhi isikhathi siyinto ebaluleke kakhulu esinayo.
Kwesinye isikhathi, ngosuku olubi, kwenziwa amaphutha, njengokuphawula kwami ​​okudelelekile. Ngiyaxolisa futhi ngiyabonga ngokusihawukela isimo sami esingesihle neze sokuziphendukela kwemvelo.
Ngiyalithanda iqhaza lakho emphakathini wesoftware wamahhala.
Ukuxolisa kwenu kwamukelwe, futhi kube yiSoftware yamahhala emide!
Sawubona José, sawubona. Inhloso yami akukhona ukudala i-tirade. Ngaphandle kokuthi amagama owakhethayo kunoma yini oyithuthukisayo noma oyisungulayo ekugcineni asetha ithoni, kungaba okuhle noma okungekuhle. Angazi kangako ngama-Linux-based distros enza izinkomba emazweni noma ezimeni zezepolitiki. Ngisho ne-Nova OS, i-distro eyenziwe eCuba nokuthi kuze kube manje ibingangeni ezweni le-OS, noma eCanaima, elibhekisa kumagugu emvelo eVenezuela. Kuyindlela yami kuphela. Ah, nami angiyena usopolitiki futhi yize ngingeyena unjiniyela ngiphinde ngibe nguchwepheshe wezobuchwepheshe.
Amagama abalulekile eDistro MinerOS azobhekisa kuphela kunoma isiphi isimo sombuso noma esizimele saseVenezuela, njengoba kuyiDistro yaseVenezuela egxile kwiDigital Mining, eyakhiwe eVenezuela! Angiboni lutho lwezepolitiki kulokho, kepha ngiyawuhlonipha umbono wakho, okunengqondo uma iphrojekthi evela kunoma yiliphi izwe iwela ngaphakathi kwemingcele yakho eveziwe.
I-Cloudbox, angiboni isenzo esithi "sezepolitiki" sokukhuluma ngegama eliyi-distro.
Impela kunjalo, angikholwa ukuthi umashiqela waseVenezuela uMaduro uyakufanelekela lokhu kuhlonishwa.
Iphrojekthi emangalisayo! Ngizolanda i-distro ukuze ngiyivivinye. Ngabe iphrojekthi izosekelwa ngokuzayo epulatifomu efana neGithub?
Njengamanje ku-Blog iyatholakala i-0.2 ngokuphelele futhi i-0.3 iyatholakala ngemuva kokunikela kuphrojekthi yokudala!
Kubukeka kuthakazelisa. Ngizobhekisisa uma beyishicilela
Siyabonga ngama-skrini nokubuyekezwa
Le distro izogxila kwezimayini zeBitcoin noma iyiphi i-cryptocurrency? Ngiyabonga kusengaphambili, kubukeka kukuhle
Noma iyiphi i-idijithali yemali ifakwa emayini kule GNU / Linux Distro inqobo nje uma kungenzeka uyihlanganise ku-Ubuntu / DEBIAN-based Distros.
UDarwin Cabin kusho
UJosé othandekayo ovela kuCry & to CA Corporation, inkampani yokuqalisa ukuqala eBlockchain naseCryptoactive Registered eVenezuela, singathanda ukuxhumana nawe ukuze sixoxe ngezindlela zokuxhasa ukuthuthukiswa kweMinerOS. Sicela uxhumane nathi nge-imeyili corpocrypto@gmail.com. Ukubingelela nempumelelo engaphezulu.
Phendula kuDarwin Cabin
Noma yini i-imeyili yami eyi: albertccs1976@gmail.com
Umngani wami ungishayele ucingo kakhulu, iphrojekthi yakho futhi ngiyithakasela impela ngingathanda ukuthola imininingwane eyengeziwe ngayo, uzoba nesiteshi sethelegran lapho ngingakubuza khona imibuzo eminingana maqondana nephrojekthi? ngiyabonga kusengaphambili .. futhi phezulu VENEZUELA! unganaki imibono engenangqondo ethi ngezwe lethu elihle .. imikhonzo
Kubukeka kukuhle kakhulu. Lapho ngikwazi ngiyazama.
Futhi kuyintokozo ukuthi ibhizinisi laseVenezuela (ukuphela kwento ezokhipha iVenezuela emhlabathini, ingalindi omesiya).
Into ethi "Petro" yigama nje lekhodi, ngokwazi kwami ​​ukuthi ayikhishwa yinoma ngubani nje. Akufanele benze impikiswano ngakho futhi kunengqondo ukuthi kusetshenziswe amagama wama-cryptocurrency.
Kanye nokuthi uqambe isoftware yezimayini efakiwe, ungabeka futhi ukuthi yimaphi ama-cryptocurrensets akhona ukusuka lapho, okungaba imininingwane "ebonakalayo" kubantu abaningi.
Ngifaka kuphela ukuthi iminyaka yezinsuku ayinayo isihlukanisi sezinkulungwane.
I-PS: Bengicabanga ukuthi iBolivarcoin iyihlaya, hhayi into yangempela.
Siyabonga ngokubuka usuku! Futhi imvelaphi engeyona eyezwe i-Cryptocurrency Community ebizwa ngeBolivarcoin indala kune-Onixcoin.
Amazwana: Siyabonga ngokuthunyelwe. Ngihlatshwe umxhwele kakhulu "ukuhlanganiswa kwendawo yeXFCE + Plasma". Bengingazi ukuthi lezi zindawo zingaxubeka.
IDistro yami yangaphambilini, ayikaze igcwale, ibizwa ngeXenOS ifike nazo zonke izindawo esezivele zifakiwe futhi zizinzile, ibisuselwa ekuhlolweni kwe-DEBIAN. Kepha ibingadumile ngoba ibingakwazanga ukwenza ukufakwa kwayo kuzinze ngeSystemback, kepha kuLiveCD bekumnandi, futhi kwafika neVirtualbox esivele ifakiwe ifakiwe.
Ngiyabingelela u-Albert, umlandeli othembekile webhulogi yakho ye-Project tic tac, nangomsebenzi wakho ngake ngakubuza ukuthi uma ungenayo i-software yamahhala yokufundisa isoftware ngifisa kube njalo, mhlawumbe ngokuzayo ungathatha lolu hlobo lwephrojekthi izotholakala kalula Labo bethu abangathanda ukuthola amakilasi we-linux nawe futhi akudingeki bakhokhele amakilasi azimele, maqondana nezifundo ezinhle kakhulu ze-cryptocurrency.
Angifundisi kunoma yisiphi isikole, ngeshwa. Okwamanje ngihlinzeka ngezinsizakalo zami zobuchwepheshe nezobuchwepheshe, nezeluleko ezisuselwa ekhaya ku-Free Software naku-Crypto-commerce. Ngivela eCaracas, eVenezuela njengoba wazi!
Njengoba ku-athikili yakho uphawula ukuthi enye yezinguqulo zayo imahhala futhi imahhala, ngithanda ukwazi ukuthi ngingayitholaphi ikhodi yomthombo yokusabalalisa, ngoba ngithanda ukubuyekeza ifomu nokusatshalaliswa kokulungiselelwa ngaphambi kokufaka uhlelo, angingabazi izwi lakhe kepha ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi ngibe nalolu lwazi uma kwenzeka kusatshalaliswa mahhala (i-GPL) futhi ine-software okufanele ilungiswe ngokucophelela ukugwema ukuvuza noma amabhuloho angalindelekile.
Ikhodi yomthombo iyi-ISO efanayo, okungukuthi, uma ulanda i-ISO ungayivula iziphu bese uhlela ifayela ngalinye lokumisa. Noma ngefomethi yayo ye-DVD / USB Live, uyiqhube futhi uyihambise ekuhlolweni kwethrafikhi nokuqapha ukubona ukuthi inalo noma lwenza noma yiluphi uhlobo lwethrafikhi ezenzakalelayo engagunyaziwe ngumsebenzisi. Ikhodi yomthombo yama-binaries, ngoba ayimvelaphi efanayo ye-Ubuntu 18.04 ne-MX Linux 17 Distros, ngoba ama-2 ahlanganisiwe ukufeza lokho okushiwo yi-MinerOS Distro. Ngikumema ukuthi ulande u-0.2 ukuze ukwazi ukuwuhlola bese ubeka amazwana!
Inkinga ukuthi e-Uruguay amalambu ayakhanya minyaka yonke
Umsebenzi omuhle kakhulu
Ngiyabonga! Yebo, isithiyo esikhulu kwezimayini ukusetshenziswa kwamandla, ngakho-ke inqubo engasindi futhi ephansi yokusetshenziswa kwenqubo iDistro ikhulula okunye ukusetshenziswa kwamandla kwemishini enikezelwe kulo msebenzi.
Ukuba Ubuntu 18.04, ngicabanga ukuthi iyayisekela, ngoba Ubuntu iyona ehambisana kakhulu futhi yesimanje ngeWindows ekhona ezingeni le-GNU / Linux.
Halala. I-distro enhle kakhulu!. Ngiyabona ukuthi usunayo i-AnyDesk esivele ifakiwe nangokulungiswa okuthile. Umbuzo wami ukuthi ngabe inguqulo 0.2 noma i-0.3 izothuthukiselwa ku-1.0 uma isiphumile? Jabulela…
IMinerOS, njengeDistro MX Linux 17 (Umama weDistro) ngokusebenzisa isifaki sendabuko iMX Install isekela ukuvuselelwa kweDistro izinguqulo zakamuva, noma kunjalo, kuleli cala ngeke ithuthukiswe isuke ku-0.3 iye ku-1.0 kusukela kwenye iDistro yayo Umama (Ubuntu) ushintsha kusuka ku-17.04 wenguqulo 0.3 kuya ku-18.04 yenguqulo 1.0. Ngakho-ke, kunconywa ngokuphelele ukufaka iMinerOS version 1.0 kusuka ekuqaleni.
Manje noma ngubani onikela ngemali ebekiwe ukuze afinyelele enguqulweni engu-0.3 uzothola isixhumanisi sokulanda senguqulo engu-1.0 mahhala ngokuphelele. Futhi noma ngubani onikela ngenani elibekiwe le-1.0 uzothola inani elishiwo kuzinguqulo 1.1 no-1.2 mahhala ngokuphelele.
Qaphela: Akuyona inkokhelo, kungumnikelo ekwakhiweni kwale GNU / Linux Distro entsha ethathe amahora amaningi / umsebenzi omningi ukwakha ngendlela yokuzidela ukuze kuzuze bonke!
UWalter Silveira kusho
Ifika ngesikhathi esifanelekile futhi esikhonjisiwe sokusungula izimayini ezikoleni nasemanyuvesi. Ukuba isoftware yamahhala futhi kulula ukuyinika amandla.
Njengomuntu osebenza naye futhi uthisha waseyunivesithi kuyithuluzi elihle lokuqala
Siyabonga ngomnikelo wakho uJose Albert, Siyakuhalalisela.
Phendula uWalter Silveira
Ngiyabonga kakhulu ngezifiso zakho ezinhle! Ngokushesha ngithemba ukukhipha inguqulo 0.3 yeMinerOS GNU / Linux ngokuphelele mahhala, okuyiyo yokugcina esuselwe ku-Ubuntu 17.04. Futhi ube nohlobo lwe-1.0 olususelwe ku-Ubuntu 18.04 olulungele ukulanda ngemuva komnikelo. Umehluko phakathi kwe-2 ngokuyisisekelo inguqulo ye-Ubuntu esebenza njengesisekelo, ukusetshenziswa kwayo okuphansi kwe-RAM, nokufakwa kwamaWallets. Ngale ndlela, manje ngafaka i-Arepacoin Wallet, futhi ngivuselela iWebapps (Imenyu Yamabhukhimakhi) kuziphequluli. Uma ngemuva komhla ka-20Feb nangaphambi kuka-20Mar kungekho zindaba zePetro Mining Software, ngizofaka kuphela i-Wallet online noma iSoftware abazoyethula bese ngibeka i-Version 1.0 online ku-Ephreli. Futhi maqondana nokusetshenziswa kwayo emaNyuvesi nakumaKolishi, noma ezinye izindawo ezizosebenzela amaFederated Node noma labo bantu ngabanye noma abasebenzisa umthetho, abafisa ukungena kwiMigining Mining ngaphandle kolwazi oluningi ngoba le Distro ilungile ngoba isivele isetshenzisiwe Ifomethi (i-DVD / USB) iyaphila (ibukhoma) noma ifakiwe, ilungele ukusetshenziswa ngokungafani nanoma iyiphi enye i-Distro kufaka phakathi Ubuntu, okumele ifakwe futhi ilungiswe kusukela ekuqaleni, okusindisa amahora / ukusebenza kanye nokunciphisa ijika lokufunda ukuthola inzuzo! Yebo-ke, ekugcineni ngithemba ukuthi wonke umuntu uyakujabulela futhi anikele ngakho konke akwaziyo ukuze ngiqhubeke nokuthuthuka, kancane kancane!
Okuhlaba umxhwele, ngicacisa ukuthi bengingazi ukuthi le webhusayithi ebengilokhu ngiyilandela iminyaka kusuka ezikhathini ze-google reader, ibiyiVenezuela, ngiyakuhalalisela futhi ngiyabonga ngewebhu, i-linux ende ende nanoma yisiphi isenzo esinciphisa lolu hlelo lokusetshenziswa kanye nenhlangano yezezimali, impi kahulumeni ye-narco
Ngiyabonga ngokulandela i-DesdeLinux!
UJoel canes kusho
Halala! Ngempela kungumnikelo omkhulu emhlabeni weSoftware yamahhala kanye nomnotho owelwe amandla. Ngithemba ukuthi iMonero izombiwa ngokusatshalaliswa, Sanibonani!
Phendula uJoel Cañas
Uma kungenjalo akufanele kube nankinga ngalokho! Inhloso enkulu yale Distro noma enye kungaba ukuyifaka ku-Gamer Consoles (ne-kernel yabo eyenziwe kahle) ukuze kuthi lapho uyiqhuba nakho konke okulungile (okufakiwe / okuhlanganisiwe) ukwenze okwami ​​kusuka, ngokwesibonelo, i-PS3 / PS4 noma iNintendo Shintsha. njengoba ngibonile namuhla kuvidiyo yabanye abaHacker abakhe iGNU / Linux enePlasma kuNintendo switch.
21-Feb-18: I-Cpuminer-Opt Mining Software ne-NEM Wallet zifakiwe kuhlobo oluzayo 1.0. AmaWebapps (Amabhukhimakhi eWebhu) avuselelwa, kwafakwa nemininingwane evuselelwe mayelana nePetro. Isisekelo (izinhlelo zokusebenza) sohlelo Lokusebenza olususelwa ku-Ubuntu 18.04 (Bionic) sibuyekezwe kuze kube ngumhla ka-21/02/18.
02-Mar-18: Ukusizakala ngokuthi kusukela izolo, iMinerOS Base, Ubuntu 18.04 LTS "Bionic Beaver", inguqulo elandelayo ye-LTS Ubuntu isingenile esigabeni esiqandayo, okusho ukuthi akukho zici ezintsha ezizongezwa ngaphambi kusukela ekwethulweni nasemsebenzini kuzogxila ekulungiseni izimbungulu ezikhona kanye nokwenza lula ukuguqulwa kwamaphakeji ahlukile, namuhla isithombe esisha seMinerOS GNU / Linux senziwe ngaso! Ngalesi sibuyekezo esisha se-GNU / Linux MinerOS Base, manje sizobona nezinto ezifana ne: I-Kernel 4.15, i-Xorg njengeseva yokuqhafaza, i-Wayland graphical server iyatholakala, i-GNOME 3.28 Desktop, enamaphakeji afana ne-Nautilus file manager 3.26, iMozilla Firefox 57.0.4 nesampula yokuqala yeLibreOffice 6.0.1.1. Ngaphambi kuka-Ephreli, ngaphambi kokukhishwa okusemthethweni kwe-Ubuntu 18.04 neMinerOS 1.0, ngithemba ukuthi ngizokwazi ukwengeza nokushiya ukusebenza kweVirtualbox 5.2 ngaphakathi kweDistro ukuze kufomethi ye-Live DVD / USB noma ngemuva kokufakwa, ikwazi ukuphatha izithombe ze-ISO uqobo. efanayo noma amanye ama-Distros ukuzama.
UFrank Silva kusho
Umsebenzi ongavamile !!
Phendula uFrank Silva
Okwamanje, ngemuva kokufaka iMinerOS, kufanele ususe ifolda .anydesk (isiqondisi) kusuka / ekhaya / $ USER ngomyalo: sudo rm -f /home/$USER/.anydesk ukuze i-AnyDesk (Access and Control Software) Remote) ivuselelwa futhi ingalungiswa kusuka ekuqaleni, ngoba uma kungenjalo i-MinerOS GNU / Linux efakiwe ingaba negama lomsebenzisi nephasiwedi efanayo. Enguqulweni yokukhishwa engu-1.0 lokhu kuzolungiswa! Okwamanje okuwukuphela kwezindaba ukuthi iLibreOffice ayisebenzi ngefomethi ye-DVD / USB Live (Live) kepha uma kufakwa iDistro isebenza kahle! Ngithemba futhi ukufaka i-Kodi ukukhulisa ukusetshenziswa kwe-Distro!
Ngiyalungisa: Sudo rm -rf /home/$USER/.anydesk
IMinerOS GNU / Linux 1.0: Sekwenziwe!
Injiniyela othandekayo uJose Albert, kulungile ukuvuma nokuhalalisela ngokwakhiwa kwale Distro. Igalelo lakhe elikhulu emphakathini alingabazeki. Ukuhalalisela okufanelekile. Bengifuna ukukubuza imibuzo: 1. Ingalandwa kuphi uma umnikelo ophakamisa ukuthi wenziwe? 2. Ngabe yiziphi izinhlelo zezimayini ezibandakanyayo? 3. Ngabe ifaka iDlay Miner kaClaymore? 4. Unayo i-step-by-step Installation Guide? Ngiyabonga kakhulu ngezimpendulo zakho. Ngicela ungibhalele, ngithanda ukubambisana nawe ekwakhiweni kwalo msebenzi. Halala !!
Buza futhi ukuthi iMinerOS GNU / Linux 1.0 isekelwa kanjani kubashayeli bamabhodi womama ahlukile nama-GPU asetshenziselwa ukumba izimayini? Ngiyabonga
1.- Ngemuva kokunikelwa kwe-0,00010000 BTC ye-Version 0.3 noma i-0,00030000 ye-BTC ye-Version 1.0 ngikuthumela i-Google Driver Link ngokufana ne-imeyili oyikhombisayo! Ngisebenzisa ama-Eobot Wallets ukuthola Iminikelo!
I-2.- IMinerOS GNU / Linux 1.0 izoletha izinhlelo zezimayini iMinergate, CGMiner, CPUMiner (Inguqulo: Multi and Opt), iClaymore (Dual ETH + DCR / SC / LBC / PASC GPU Miner 10.2) neXMR-STAK-CPU, kanye ne I-Armory, i-Bolivarcoin, i-Exodus, i-Jaxx, i-Magi, i-Onixcoin wallets kanye ne-plugin ye-Trezor Hardware Wallet etholwe ngokuzenzakalela.
3.- Yebo: IClaymore (Dual ETH + DCR / SC / LBC / PASC GPU Miner 10.2)
4.- Unokufundisa ngevidiyo yokufaka kule ncwadi: https://proyectotictac.wordpress.com/2018/03/07/mineros-gnu-linux-1-0-ya-esta-lista/
5.- Ngikusiza ngale imeyili: albertccs1976@gmail.com
Ing. Jose Albert ngiyabonga ngokuphendula. Eminye imibuzo? Lithini ikheli lakho le-BTC? Xhumana nawe ngeposi ngomnikelo? Ngingakwazi ukufaka iClaymore's Dual Miner 11.2 ku-Distro yakho, esivele itholakala? Izixhumanisi zokulanda ziyi-GOOGLE: https://drive.google.com/open?id=0B69wv2iqszefdFZUV2toUG5HdlU neMEGA: https://mega.nz/#F!O4YA2JgD!n2b4iSHQDruEsYUvTQP5_w
Ngiyabonga. Ozithobayo. Halala
Ikheli le-LTC: LgcK79zr7zoRP2HqfGrMvdWPKobcdWtqzE
Ikheli le-BCH: 1QBVdzdQTmEzSc7PEcXmogiqCbbqC274iC
Indawo yokufika: 1286923
Ikheli le-ZEC: t1eCN7qmsTQQiHgAbVNPYYgYFGPuvQGRUjr
I-ID yenkokhelo: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001286923
Ikheli le-MAID: 15easGdbFy4TuwvsmVDwNYZukxRskGodJN
Ngemuva kokunikela, i-imeyili kufanele ithunyelwe ku-akhawunti ye-imeyili "albertccs1976@gmail.com" enegama noma i-Internet Alias, Izwe kanye Nemali enikelwe, ukuqinisekisa ukudluliswa nokubuyiselwa kwe-imeyili ngezixhumanisi ezifanele zokulanda.
YEBO. Ungabuyekeza futhi / noma ungeze cishe noma iyiphi iMining Software eza neLinux ngisho neWindows uma ufaka i-Playonlinux noma iWayini!
Ngale ndlela, ngomzuzu wokugcina ngangeze iHhovisi le-Office Suite WPS Office ngokuphelele ngeSpanish ukuthi uma ivula ngemodi ebukhoma yeDistro ukunxephezela lokho iLibreOffice engakwenzi! Futhi ineKODI Multimedia Center evumela ukuphathwa kokuqukethwe kwe-multimedia ku-intanethi noma ukulandwa futhi kudlalwe nokududuzwa kwamageyimu wevidiyo yama-retro ngokulingisa ama-ROM abo.
Ing. UJoseph Albert ntambama enhle, okunye ukungabaza enginakho:
IMinerOS GNU / Linux 1.0 iyathuthukiswa ngezinqolobane ze-Ubuntu ??
Ngabe iMinerOS GNU / Linux 1.0 isekelwa kanjani abashayeli bama-AMD ne-NVIDIA Motherboards nama-GPU ahlukene asetshenziswa kwezimayini?
Uma ucabanga ukuthi Ubuntu 18.04 LTS izokhululwa ngo-Ephreli 26 kunguqulo yayo yokugcina ezinzile, ngabe kuzoba khona noma yikuphi ukubuyekezwa kweMinerOS GNU / Linux 1.0, ngemuva kwalokhu? Ngabe kusengaba yiMinerOS GNU / Linux 1.0 noma ngabe izoba ne-sub-version efana ne-1.1 noma into enjalo?
IMinerOS GNU / Linux 1.0 izophuma ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kokukhishwa kwe-Ubuntu 18.04, bese kuthi u-1.1 no-1.2 baphume.
Yebo. Sebenzisa amakhosombe e-Ubuntu ne-MX Linux 17 uwedwa noma ndawonye. Ukusekelwa kufana noBuntu.
Okwalabo abafuna ukunikela kanye / noma ukuthola iDistro, lawa yiWallets yami yeminikelo:
16-Mar-18: Kuze kube manje ama-7 GNU / Linux 1.0 Mining Operating Systems afakiwe kumaDeskithophu nakuma-Mobile Computers anezici ezahlukahlukene zobuchwepheshe ezindaweni ezahlukahlukene (Izikhungo kanye Namakhaya) ukuze zisetshenziselwe ukuphatha kuphela (ihhovisi ezisebenzelayo) nokuhlola ukusebenza kwazo njengenhloso ejwayelekile iDistro yamaKhaya namaHhovisi. Konke sekwenziwe ngokugculisayo kuze kube manje.
15-Mar-18: I-ISO yokugcina ngokufakwa kwePetro Wallet.
14-Mar-18: Ukuhlanganiswa kokugcina kwe-ISO nge-4.5GB ngokusetshenziswa okuphakathi kuka-0.4 GB wememori ye-RAM ekuqaleni kanye ne-13 GB yeDisk Space lapho ifakiwe, futhi kunezinhlelo zokusebenza ezingaphezu kuka-3700 esezivele zifakiwe. Ukucatshangelwa kokucaciswa kwezinguqulo 1.1 no-1.2 kuyaqala, okulindeleke ukuthi kufake izinguquko ezilandelayo:
a) Inguqulo 1.1: I-ISO iphakeme kune-4.7 GB ngakho-ke izosebenza kusuka ku-8.4 GB Double Layer DVD noma ku-8 GB USB Drive Drive. Izofika ne-Playonlinux, iWine, neSteam esivele ifakiwe. Futhi mhlawumbe ama-Emulators ambalwa we-Retro Game Console. Izosekela ukufakwa (okulula) kwezicelo zomdabu zeWindows, ikakhulukazi Imidlalo.
b) Inguqulo 1.2: I-ISO iphakeme kune-4.7 GB ngakho-ke izosebenza kusuka ku-8.4 GB Double Layer DVD noma ku-8 GB USB Unit Unit. Izofika ne-MS Office 2016 esivele ifakiwe. Ukusetshenziswa okusobala, okwamukelekayo nokuzinzile kweWindows neMS Office Abasebenzisi ku-GNU / Linux (MinerOS).
Qaphela: Ngenkathi iMinerOS GNU / Linux 1.0 ingu-64Bit yokwakha, izinhlobo ezingu-1.1 no-1.2 zizoba ukwakhiwa okuningi, okungukuthi, i-32 ne-64 Bit. Okwenzelwe ukusetshenziswa komhlaba jikelele okubanzi kokusetshenziswa kwayo!
13-Mar-18: Inqubo yokususa izicelo ezeqile (ezingadingekile) eDistro iqale ukwengeza ezibaluleke kakhulu, ngaphandle kokukhulisa usayizi wamanje we-ISO (4.5GB). Lokhu kuvumele okulandelayo ukuthi kungezwe: I-Alternative Firefox (Inguqulo 51.0.1) esekela i-Java web plugin (JRE), efakwe kanye ne-Sun Java JDK 9.0.4 ephelele. Konke lokhu ukuze i-Distro ikulungele ukwenziwa kwezinhlelo zasendaweni kanye nezewebhu kanye nezicelo ezenziwe kuJava ezifana neRetro Console Emulated Games. Uhlu olubanzi lwezixhumanisi (i-URL / Izixhumanisi) lufakiwe kuma-webapps (i-Internet Browsers Bookmarks Menu) kuma-Emulators, ama-ROM, kanye neMidlalo eku-inthanethi kanye namasayithi alandekayo we-Retro Consoles.
10-Mar-18: Kususwe inkambiso yesi-5 yeConky (i-Desktop Monitor) ingezwe futhi yathuthukiswa i-1 Conky ingezwe ngolwazi olufanayo nokuningi. Njengoba i-5th Conky inikeza izinkinga zokubonisa ngokuqhafazayo lapho iqala ezinqumweni eziphansi.
08-Mar-18: Ihhovisi le-WPS lifakiwe njenge-Office Suite eyengeziwe, ngokuphelele ngeSpanish, nesichazamazwi salo sokupela ngeSpanishi nawo wonke amafonti omdabu afakiwe neLibreOffice ibuyekezelwe enguqulweni 6.0.2.1 neMozilla Firefox ukuze inguqulo 58.0.2, okwenza isithombe se-Distro sika-ISO sikhuphuke siye ku-4.5GB.
07-Mar-18: Kusukela kulolu suku kuqhubeke, kuzokwenziwa kuphela ama-video tutorials amasha wokuthi iMinerOS GNU / Linux 1.0 ikanjani, ifaka futhi isebenze, ukuze bazokwazi i-Distro ngokuphelele. Kuze kukhishwe Ubuntu 18.04, kanye nezibuyekezo zakamuva ze-MX Linux 17, bakhiqize inguqulo yokugcina necacile nesithombe se-ISO seMinerOS GNU / Linux 1.0, esizotholakala mahhala mahhala kubanikeli ngomnikelo we-10.000 satoshis ( 0.00010000 BTC) yenguqulo 0.3 nangokukhokha umnikelo wama-satoshis angama-30.000 (0.00030000 BTC) wabanikeli abasha.
06-Mar-18: Kodi (iMultimedia Center / Media Center) ingezwe kwiDistro MinerOS GNU / Linux 1.0. Ungangena ngqo kwi-Multimedia Center noma ezindaweni ze-XFCE ne-Plasma Desktop, ukuphatha Izinsizakusebenza ze-Multimedia (Ama-Movie, Amavidiyo, Umculo, Imisindo, Izithombe nokunye okuqukethwe ku-inthanethi noma okulandiwe). Kufaka phakathi kungenzeka kwemidlalo yeRetro Console (Atari, SEGA, DreamCast, phakathi kwabanye). Isivele iza namaRekhodi weIntrcomp.net, SRP.nu, Fusion.tvaddons.co, Gamestarter kanye noZach Morris. Nezengezo ze-Internet Archive ROM Launcher (ama-plugins) phakathi kwabanye. Okuzokhula ukwenza ngcono ukusetshenziswa kwe-Kodi Multimedia Center.
UMiguel Matos kusho
Kuhle kakhulu, sengivele nginenguqulo ebukhoma ye-distro eshiwo ukuyivivinya; kepha angazi ukuthi kungani ngidinga ukufaka iphasiwedi yokungena, futhi anginalo lolo lwazi engingalufaka. Ngingathanda ukwazi ukuthi lokho kuza kanjena ngokuzenzakalela, noma ngabe kungenxa yokuthi ithuluzi lokucabanga lediski lisetshenzisiwe kusuka kunguqulo efakiwe futhi angizange ngalulekwe nge-password.
Phendula uMiguel Matos
UFrancisco Esposito kusho
Sawubona Jose, ngiyakuhalalisela kubhulogi yakho, hlobo luni lwehadiwe elinconywayo noma elifanele lona?
Phendula uFrancisco Esposito
Okwamanje, umvukuzi wokuqhafaza nabavukuzi be-console abafakiwe bangakwazi ukukhipha i-CPU kalula kepha ngemuva kokufaka amaDrayivu ekhadi ngalinye lemifanekiso bazokwazi ukumba ngaphandle kwezinkinga nge-GPU.
Inguqulo 0.2 - 0.3 - 1.0: Umsebenzisi: sysadmin / Iphasiwedi: Sysadmin * 2018 *
UCarlos Escobar kusho
Bahle kakhulu, abantu abanjengaWE, banomdlandla nangokuqiniseka ukuthi izinto zingenziwa endaweni yangakini. Ngiyakuhalalisela. Ngizokufaka bese ngikubhalela ngakho.
Phendula uCarlos Escobar
Ngiyabonga ngokuphawula kwakho futhi uma kuliqiniso impela ukuthi endaweni ukuxazulula ukusebenzisa amathuba (ubunzima).
Namuhla ungalanda izinhlobo ze-Beta 0.2, 0.3 ne-RC1 ze-Version 1.0 mahhala. Futhi inguqulo yomnikelo wangaphambilini engu-1.0 izinzile.
Sawubona Othandekayo, ngifuna ukuvivinya i-distro yakho eyami ngeqembu elikhethekile layo. Kepha nginemibuzo ethile, ungangithumelela i-imeyili ukuze ngibonisane nawe?
I-imeyili yami ithi kleisinger.lucio@gmail.com
umsebenzi wakho ubonakala uthakazelisa kakhulu
ngiyabonga kusengaphambili, imikhonzo evela e-Argentina
UJohan linares kusho
Ubuwazi ukuthi ipulatifomu yezimayini iMintMe iyahambisana neLinux? Ngakho-ke ikakhulukazi ngemuva kokuthuthuka abakukhiphe ngenguqulo yabo yakamuva 1.2. Lapha ngikushiya isixhumanisi ukuze ubuyekeze zonke izibuyekezo ezenziwe https://www.mintme.com/news/release-notes-v1-2
Phendula uJohan Linares